Rikoooo.com - Ọdịnihu nke Freighters
Nchịkọta ụlọ Hangar Talk Terminal Real ụgbọelu
Ọdịnihu nke Freighters
onye njikwa oge: superskullmaster
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 30 Mar 2017, 10:48 am
Na ugbu a lineup nke Freighters a na-nwayọọ nwayọọ phased, m nọ na-awagharị awagharị, ihe bụ ihe ga-eme n'ọdịnihu maka nnụnụ ndị a? Ụgbọ elu dị ka B747,757,767 ... A300,310 na-aba na mmepụta, ma ọ bụ ukwuu eleghi anya na ma Boeing na Airbus ga-aga n'ihi ugboibu nsụgharị nke 787,777-x, A330Neo na A350, otú ahụ ka m ga-achọ ịjụ, gịnị ka unu na-eche banyere ya , bụ n'ebe ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu maka Freighters?
Gịnị ga-eme mgbe ikpeazụ nke ẹdude Freighters na-lara ezumike nká?
Ì chere na Boeing ma ọ bụ Airbus ga-aga n'ihi Freighters na ihe ọ bụla nke ugbu a ụgbọ elu?
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 30 Mar 2017, 11:16 am
Oh My enyi, i nwere ike ịbụ ihe ọzọ na-ezighị ezi
The 747 bụ ka ukwuu na mmepụta (ma Pax na ibu), na e nwere n'ezie a ugboibu version nke 777. N'eziokwu, 129 777Fs e nye dị ka nke February. The 767 bụkwa ka mmepụta ihe, na FedEx iwu a dum crapload nke ugboibu version
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 30 Mar 2017, 12:48 am
... Oh ọma, Echere m na m bụ.
Mgbe ụfọdụ nchọgharị gburugburu Boeing web site, m ga-asị na m bụ n'ezie-ezighị ezi ... m pụtara, ihe a akara up ... mere nke ọma Boeing. On n'akụkụ nke ọzọ bụ Airbus ... Echere m na m bụ nri ha ...
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 31 Mar 2017, 05:30 am
yeah, Boeing bụ mara mma dị egwu. N'eziokwu, anyị nwere ugbu a abụọ B-29s efe efe ekele ha.
N'ime ogologo oge ọ bụ naanị "FIFI", mana ekele maka osisi Boeing nke Kansas, "DOC" weghachitere ma na-efegharị ọzọ. Ihe na-akpali mmasị bụ ..... na SAME osisi ahụ ... bụ ebe ọmụmụ DOC. N'ezie, ụfọdụ n'ime ndị mbụ nyere aka wuo DOC buru ụzọ rụọ ọrụ na ndị ọrụ Boeing ugbu a iji tinye DOC n'ikuku
Ị gaghị agwa m na abụghị ezigbo njọ ass
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 31 Mar 2017, 16:30 am
O juru m anya na airbus enweghi ike ihu n’atụmatụ nke aka ha, nke kachasị na A350 na A380. Anaghị m ekwu na 747 jọrọ njọ ma ọ bụ ihe, ma ọnụọgụ zuru oke, ndị na-ebu ụzọ abụọ nwere ike ịbụ ihe ịtụnanya. Gbakwunye na mpaghara dị ịtụnanya, 8 500 nm, yabụ ka anyị kwuo 1000 dị ala na ụdị Freighter, nke ahụ ka bụ ọmarịcha oke.
M nnọọ ike ịghọta ya ... Ha na-ekwu okwu banyere ụfọdụ Pax-ugboibu program, iji tọghata ẹdude Pax ụgbọ elu na ibu .... na na nwetara m eche echiche banyere A340-500 F ... otú ihe ọjọọ ass bụ na? M pụtara, ma ọ bụrụ na ị na-echeta MD-11, ọ bụ ọdachi ka a Pax ụgbọelu, ma ịnọ-on ka a ugboibu.
Laghachi na "Ezigbo ụgbọelu"